DHEGEYSO: DF Somalia oo ka hadashay hantida qaran ee ka maqan gacmaha Dowladda + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka DHEGEYSO: DF Somalia oo ka hadashay hantida qaran ee ka maqan gacmaha...
DHEGEYSO: DF Somalia oo ka hadashay hantida qaran ee ka maqan gacmaha Dowladda + Sawirro
(Muqdisho) 21 Agoosto 2019 – Shirkaan Jaraa’id uu Muqdisho ugu qabtay warbaahinta Wasiirka Maaliyadda Xukuumada Federaalka Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxaa uu ugu horeyn kaga hadlay geedi socodka wadahadalka deyn cafinta oo maraya wajigiisa afaraad waxaana uu ka muujiyay raja wanaagsan.
Wasiir Beyle shirkiisa jaraad kaga dhawaaqay in wasaaradu soo gabagabeeysay tirakoob ay ku sameysay hantida ma guurtada ah iyo guurtada ee qaranku leeyahay.
Wasiirka ayaa ku daray in dhawaan Wasaaradda Maaliyada ay tira koobka ay sameysay ay ku wareejin doonto Guddigga qaran ee soo celinta Hantida qaranka uu dhawaan sameeyay Ra’isalwasaaraha Soomaaliya si dib loogu soo celiyo inta ka maqan gacanta dowladda.
Previous articleDF Somalia oo dejisey qorshe kashifi doona Dowladda Kenya & A. Madoone oo 3 arrimood wajahaya
Next article”Waar anigu DOQON maahi!” – Lukaku oo kashifay arrin ay samaysay Man Utd oo keentay inuu ka calool xirto!